FANAMBOARANA NY KIANJA : Velom-panantenana ny tanora any Antsiranana
Raha tsy misy fiovana ho tonga any Antsiranana amin’ity herinandro ity ilay « architecte » hikarakara ny asa fanitarana sy fanatsarana ny kianja mitafo ao an-toerana. 12 février 2019
Mikasika ny kianja manara-penitra kosa dia hitohy ato ho ato ny asa fanamboarana azy ary mety hatomboka amin’ny fametrahana ny fefy. Marihina mantsy fa saika nanorenan’olona trano manodidina ny toerana misy an’ity kianja ity ary misy amin’izy ireo tompon’andraikitra ara-panjakana ambony.
Tsara ny manamarika fa natomboka tamin’ny andron’ny Tetezamita ny fanamboarana ity kianja manara-penitra ity saingy rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ingahy Hery Rajaonarimampianina dia tsy nitohizana ny asa noho ny antony politika mazava ho azy. Toetra tsy miendrika mpitondra ary lavitra ny izay dradrainy tamin’izy mbola nitondra mikasika ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena. 80% ny asa fanamboarana an’ity kianja manara-penitra ity no efa vita tamin’izay fa amin’izao fotoana izao maro ny zavatra simba.
Tahaka ny eny amin’ny tany lava volo ireny ao anatin’ity kianja ity ankehitriny. Izany ve mba fitiavana tanora sy Tanin drazana ? Na izany na tsy izany velom-panantenana ny tanora any Antsiranana taorian’ny fandalovan’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tany an-toerana. Vinavinaina ho vita alohan’ny volana jona ny asa fanamboarana ny Kianja manara-penitra.
Mpizahatany voatafika, vazaha vavy iray voatifitra, lasan’ny jiolahy ny vola 600 euros TSINGIN’I BEMARAHA (249) 20 mai 2019 Tamin’ny alalan’ny « Gps » no nahatrarana ireo jiolahy HALATRA MOTO TENY SOAVIMASOANDRO (194) 22 mai 2019 Nitsoaka ny fonja ilay tovolahy nitifitra azy TOVOVAVY IRAY MATY NISY NAMONO TANY TOLIARA (177) 22 mai 2019 Ravan’ny polisin’ny Fip ny tambajotran’ny mpamaky trano ny alahady 19 mey lasa teo TOAMASINA (160) 20 mai 2019 Mampihena ny tahan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana TSAHO MIELY MOMBA NY HOPITALIM-PANJAKANA (157) 20 mai 2019 Vehivavy iray tratran’ny fokonolona nangalatra sy namaky trano AMBALABE TOAMASINA (150) 23 mai 2019